UNHCR oo ugu baaqday Saudi Arabia joojinta tarxiilka Somalida - BBC Somali
UNHCR oo ugu baaqday Saudi Arabia joojinta tarxiilka Somalida
2 Agoosto 2010
Image caption Barkacayaasha Muqdishu
Heyada Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa ugu baaqday Saudi Arabia inay joojiso tarxiilka dadka ka soo qaxay dagaallada ee sida khasabka dib loogu celiyo Somalia.
War-saxaafadeed heyadda UNCHR ay ka soo saartay xafiiskeeda magaalada Geneva ayaa waxa lagu sheegay in aad looga walaacsan yahay warbixinnada sheegaya in barakacayaal Somali ah dib looga tarxiiliyo dalka Saudi Arabia, laguna celiyo Somalia oo ay weli taallo dhibaatooyinkii iyo xasilooni-darradii ay ka soo yaaceen dadkaasi, gaar ahaanna magaalada Muqdishu oo dagaalo ba'an oo isdabajoog ahi ay wax badan ka jireen.
Dal kasta, xil ayaa ka saaran dhawrista iyo daryeelka xuquuqda aadaminnimada ee caalamiga ah.
Melissa Fleming, UNHCR, Geneva
Afhayeen ka tirsan xafiiska UNHCR ee Geneva, Melissa Fleming, ayaa sheegtay in dawladda Saudi Arabia ay ugu baaqayaan inay ka waantowdo oo ay joojiso tarxiilka Somalida, iyada oo la xeerinayo xuquuqda caalamiga ah ee banii'aadminnimada.
Image caption Barakacayaal tahriib ah
Warbixin uu soo saaray xafiiskaasi Geneva ayaa lagu sheegay in tira badan oo Somali ah dib loogu celiyey magaalada Muqdishu sanaddii aynnu soo dhaafnay, ka sakow dagaallada iyo deganaansho la'aanta ka socota Somalia, xaaladahaasi oo ah kuwii marka horeba ku kallifay dadkani inay soo barabaxaan oo ay ka qaxaan degaannadoodii iyo magaalada Muqdishu intaba. Sida warbixinta lagu qeexay, bishii June ee sanadkani oo qudha, dawladda Saudi Arabia waxay dib ugu celisay magaalada Muqdishu dad ilaa 1000 qof gaadhaya. Kun kalena waxa laga daba geeyey bishii July.
Sida ka muuqata warbixinnada hey'adaha UN, Somalia dadka ka barakacay ee ka yaacay dagaallada dalka gudihiisa, waxa lagu qiyaasaa ilaa iyo 1.4 malyuun oo qof; nus malyuun qof oo kalena waxa la rumaysan yahay inay dalka debada uga baxeen oo ay qaxooti iyo magangelyo siyaasadeed raadsadeen. Boqolaal kun oo kale oo qaxooti ah ayaa iyaguna ku jira xeryaha qaxootiga ee dalalka bariga Africa, gaar ahaanna xerooyinka gobolka W/bari ee Kenya.
Image caption Barakacayaal ku xanniban gudaha
Barakacayaasha weli ku xanniban magaalada Muqdishu dhexdeeda waxa lagu qiyaasaa ilaa 300,000. In badan oo kalena waxay ku sugan yihiin degaannada u dhawdhaw magaalada, si ku-meel-gaadh ah.Ilaa 200,000 oo kale ayaa la sheegay inay iyaguna u qaxeen oo ay ku xanniban yihiin gobollo dalka gudhiisa ah, xaaladaha ka jiraana ay u saamixi waayeyeen inay dhinacna uga bixi karaan.
Image caption Qaxootiga u tahriibay Yemen
Waxa kale oo sanado badan socdey qaxootiga ka tahriibaya Somalia, ee maraya dhinaca badaha, gaar ahaanna Bada Cas, una tallaabaya dhinaca xeebaha dalka Yemen, qaar badanna uga sii gudbaan dalka Saudi Arabia. In badan oo kalena waxay ku sii dhintaan dhexda iyaga oo ku hallima Badda Cas iyo doonyo aan awod lahayan oo dhexda ku burbura amma dadk ku daadiya badda.Boqolaal kun oo ah qaxooti tahriibayaal ah oo Somali ah ayaa haatan ku sugan dalka Yemen.
Image caption Saudi Arabia, Gulf of Aden
Saudi Arabia waxay ka mid tahay dalalka khaliijka ee xoogsatada Somalidu u dhoofi jireen, una shaqo tegi jireen muddo aad u dheer, gaar ahaanna xilliyadii soosaarka saliidda iyo dhismaha dalalka khaliijka. Ganacsiga u dhexeeya khaliijka iyo dalalka geeska Afrika iyo Afrikada bari ayaa isna si xawli leh u socdey, taasi oo keentay in dad badan oo Somali ah oo baacyacmushtar ahi ay tagaan ama xidhiidh la yeeshaan dalalka Khaliijka. Laakiin ma badnaa dadka sharciyada deganaanshaha ah ka helay dalalkaasi, intooda badanina way ka baxeen markii suuqyadii dhaqaalaha iyo shaqooyinkii ay gabaabsi noqdeen.
Intii dagaallada sokeeyey ay ka qarxadeen Somalia, waa jirey dad badan oo tahriib ah oo galay dalka Saudi Arabia, hase ahaatee Dawladda Saudigu uma samayn wax daryeel iyo nidaam ah midna.
Dhinaca kale, Saudi Arabia weligeed ma saxeexin heshiisyada iyo xeerarka caalamiga ah ee daryeelka qaxootiga iyo magangelyo-doonka, laakiin UNHCR waxay ku doodaysaa in dal kastaba ay waajib ay ku tahay oo xil ka saaran yahay daryeelka qaxootiga, iyo gaar ahaan badbaadada barakacayaasha Somalida, sababta oo ah in dadkaasi aanay dib ugu noqon karin haatan dalkoodii, marka loo eego xaaladaha ka jira iyo badbaadada naftooda.
UNHCR waxa kale oo ay sheegtay inay haatan kala xaajoonayso dawladda Saudi Arabia, inay wadjir uga shaqeeyaan oo ay isla eegaan qaxooti iyo barakacayaasha Somalida ee ku sugan dalkaas, iyo waxa laga qaban karo.